na ku saabsan - AlorAir
AlorAir waxaa la aasaasay on falsafadda ah bixinta qiimaha, muuqaalada keentay warshadaha iyo waxqabadka ay la socoto taageerada macaamiisha u fiican. Sida aynu u gaari karaan in? Iyada oo awood u-soo-saarka heer caalami ah, R ballaaran & goobaha D iyo kooxda quduuska ah oo shurako ah in aad taageero ka hor iyo ka dib iibka.
In America, aanu leenahay qaybinta on bari iyo xeebta galbeed iyo shabakad sii kordhaysa ee ka ganacsada iyo qaybiya. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin laamaha ee Europe, Australia iyo Asia.
line soo saarka Our ayaa haatan diirada laba suuqyada - qaybta hoose / crawlspace oo daadkii / dib u soo celinta.
Waayo, suuqa daad / dib u soo celinta, waxaan leenahay line a full of dehumidifiers - orientation siman oo taagan labadaba. Iyada oo isku-dar ah sifooyinka fasalka keentay, fursadaha awoodda kala duwan, iyo hufnaan dayactirka, dehumidifiers ku hubin inuu ugu cadcad a. Si aad amaan dehumidifiers ah, waxaan leenahay Dami iyo scrubbers HEPA si ay u caawiyaan dadaalada lagu qalajiyo iyo dhaqancelinta ah.
Our unugyada crawlspace iyo qaybta hoose ayaa sidoo kale waxay leedahay waxyaalo fasalka keentay sida ay gacanta digital, helitaanka fudud qaybood, furaysto-n-ciyaar iyo xataa bamka ah condensate dhafan on unit our crawlspace siman! Add to kuwan sifooyinka, design fudud ee isafgaradka, fursadaha sifeynta kala duwan, gacanta iyo ducting fursadaha fog, unugyada, kuwaas oo lagu diirsaday doonaa by the xidhaba iyo macaamiisha.
waxyaabaha AlorAir leeyihiin caddeyn kala duwan taas oo ku xidhan isticmaalkooda loogu talo galay oo ay ku jiraan fursadaha Energy Star, CE, imanaysa ETL, SGS iyo TUV. waxyaabaha waxaa loogu talagalay, diyaarisay oo baadhis si ay u hubiyaan heerka ugu sareeya ee tayada macaamiishayada. Injineerada Our sii wadaan in ay ku hardiyi bokhshadda loogu talagalay heerarka fulin cusub iyo muuqaalada in ay ka farxiyaan dadka macaamiisha noo ah.
Hadafkeenu waa in si joogto ah innovate iyo siiyaan wax soo saarka ugu wanaagsan ee qiimaha kama dambaysta ah. AlorAir ballan qaaday inay isticmaalaan ilaha ugu fiican, technology, qalab iyo taageero-iib aheyn ka dib in howlgalka this dhab ah ka dhigi macaamiishayada.